Esi họrọ stovu pellet: ndụmọdụ bara uru - Dafne Design
Home Ndụmọdụ na n'ike mmụọ nsọ Kedu otu esi ahọpụta stovu pellet: ndụmọdụ ...
Esi họrọ stovu pellet
Na ibe a anyi ga ekwu maka:
Jiri nlezianya nyochaa maka nlezianya nhọrọ
Mgbe anyị ga-ekpebi otu esi ahọpụta stovu pellet ihe mbụ ị ga-eme bụ ịjụ ihe ziri ezi ma tụlee ohere na ụlọ a ga-etinye ya. Nke a na-achọ ike nke a ga-achọ iji kpochapụ gburugburu ebe obibi ajụjụ.
Ihe akuku nke ngwa a na-egosi oriri, ego na data ntanetị, ihe ndị bụ isi maka nhọrọ ziri ezi nke ihe mmezi nke pellet.
N'ahịa, e nwere ọtụtụ ụdị ndị na-emepụta site na pellets, mmanụ ụgbọala nke osisi ndị na-adịghị mma na-emepụta nke ọma na-etinye aka na capsules maka combustion.
Esi họrọ stovu pellet: ọnọdụ maka ịhọrọ
Ọ dị ezigbo mkpa iji nyochaa ọnụnọ nke isi preconditions maka echichi nke na stovu, dị ka ịdị adị ma ọ bụ ekwe omume nke ịhụ mmezu nke flue, isi nke ikuku oriri maka nnọchi nke oxygen na ga ekwe a njikọ na 'mputa nke ụlọ ahụ, ọnụnọ nke onye tinyekwa nke ọkụ eletrik maka mmalite-elu na ime ihe nke kpo oku mmewere.
Ọzọkwa, ọ dịkwa mkpa iji kpebie otu esi ahọpụta stovu pellet, ma ọ bụ ịhọrọ maka ikuku ma ọ bụ ụdị mmiri. Onye nke mbụ na - enye ohere ikuku ikuku na - ekpo ọkụ ma na - ekesa ya n'ime ụlọ dị iche iche site na usoro ịwa ahụ, na - eme ka ọkpụkpụ ọkụ. Ihe nke abuo ekwuru na eme ka mmiri na-ekpo ekpo maka ihe ndi ocha na ihe ndi ozo.
Ozokwa, ọ dị mkpa ịhọrọ stovu maka ụlọ nke a ga-etinye ya ebe ọ bụ na 30% nke ọkụ ahụ mepụtara nọgidere n'ime ụlọ mbụ ahụ ọ bụrụ na ọ dị obere, o nwere ike ikpo ọkụ ma mee ka ohere ghara ịdị.
Nri na njirimara: otu esi ahọrọ stovu pellet
Ọ dị mkpa ịmara otú ị ga - esi ahọrọ stovu pellet, nke akara na akwụkwọ nta bụ CE akara, iwu nyocha nke stovu ahụ nwere ọganihu, ike nke stovu n'onwe ya, mkpụrụ, na pasent, njirimara emission nke carbon dioxide nke site na iwu ga-abụ ihe na-erughị 0,04%, na-atụle na ala ahụ dị ntakịrị, obere ihe na-emetọ ihe ọkụkụ, aha nke onye na-emepụta ga-ekwenye na enyemaka ga-adị n'ókèala dum.
Na oriri? The calorific uru nke pellets bụ na nkezi hà 4,6 kWh / n'arọ, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na a 9 kW okpomọkụ na a all'87% arụmọrụ mgbe na-arụ ọrụ na kacha ike iwesa ke otu hour 2,25 n'arọ, mgbe kacha nta ike 600 grams nke mmanụ ụgbọala pellets kwa awa.
Na nkenke, nkezi ọnụahịa iji kpoo ụlọ ahụ bụ banyere 70 euro megide 90 euro methane gas kwa MWh, nke dị ọnụ ala karịa.
Ndụmọdụ na n'ike mmụọ nsọ
Ugbo ala, ụgbọ ma ọ bụ ...
Ezigbo ụlọ ịsa ahụ na-enye gị ụlọ ...
Kedu otu esi ahọrọ ngwá ụlọ kwesịrị ekwesị maka ...
zaghachi Kwụsị azaghachi